Amanye amava kuthintelo nolawulo lwe-COVID-19 | Isinyithi seShoufan
Ngoku i-Corona-virus isasazeka kwihlabathi lonke. Kutshanje sifumana iindaba ezininzi ezivela kubaxhasi malunga nemeko yamazwe abo. Siyazi ukuba abanye benu banexhala ngentsholongwane.
Kwixesha elidlulileyo, sinamava afanayo nalawo uhlangabezana nawo ngoku. Sifuna ukwabelana ngamava nawe malunga nendlela esiyichitha ngayo ixesha elidlulileyo. Ndiyathemba ukuba oku kuyakwenza uncedo.
Ukusuka kwidatha yeenkcukacha-manani, intsholongwane ayoyiki kangako, njengeflue eyenzeka rhoqo. Kodwa ukusasazeka kwe-corona-virus kunamandla. Ngexesha lobhubhane, siyacelwa ukuba sihlale ekhaya kwaye singaphumi. Kuba ukuba abantu abaninzi bayachaphazeleka ngaxeshanye, akukho bhedi yaneleyo noogqirha esibhedlele. Uninzi lwabantu luphulukene nobomi babo kuba abanakuphathwa ngamaxesha aphezulu.
Kwangelo xesha, xa ufumanisa abantu abachaphazelekayo, abantu adibene nabo kwaye wadibana nabo ngaphambili bayakufunyanwa kwaye bacelwe ukuba babekelwe bodwa iintsuku ezili-14, ukuba akukho mpawu inxulumene nentsholongwane, oko kuthetha ukuba bakhuselekile.
Ukuba bachaphazelekile kwaye abanzulu, banokusebenzisa amayeza emveli amaTshayina okanye amayeza asesibhedlele, bahlale kwigumbi elizimeleyo ukuze bachache. Ukuba ayisiyongozi, uninzi luya kuphila ngeli xesha.
Hlala wonwabile, wenze umthambo ngakumbi kwaye uhlale ekhaya.
Ukuba kufuneka siphume ngaphandle, imaski iyimfuneko kakhulu. Kwaye xa ubuyela ekhaya, iimpahla kufuneka zenziwe zintsholongwane nge-75% yotywala. Ngale ndlela, ithuba lokosuleleka liyakuba sezantsi kakhulu
Lithuba elihle lokonwabela ixesha nosapho lwethu kuba ngesiqhelo, umsebenzi uthatha ixesha lethu elininzi. Kwangelo xesha, kukho ixesha elaneleyo lokufunda nokufunda izinto onomdla kuzo. Ukufumana ezinye izinto zokwenza kuya kusenza sizive ngcono.
Enkosi ngazo zonke iintsikelelo zabaxumi bethu kunye nabahlobo.
Ngexesha elinzima, sifumana uncedo oluninzi kumazwe akho.
Ngoku siza kunisikelela nonke kwaye siqinisekile ubhubhane izakudlula kungekudala. Kwaye ilizwe lethu liyakunceda kwaye labelane ngawo onke amava. Nceda ungakhathazeki, sikunye njengosapho olukhulu emhlabeni omnye. Ukuba ufuna naluphi na uncedo, nceda usazise.
Umfanekiso ovela eTshayina mihla le